I-mastic resin, ukusuka kwiChios | Ukuhamba kwe-Absolut
Ngenye ye Uninzi lweemveliso zaseGrisi kwaye ivela kubuhle Isiqithi saseChios: la intlaka yemastic, ekwabizwa ngeSpanish njenge Imastic okanye i-mastic.
Le resin inuka kamnandi yendalo ivela kuhlobo lwemastic (Pistacia lentiscusekhula kuphela emazantsi esi siqithi. Iipropathi zayo ezizodwa kunye nevumba lazo elilodwa sisiphumo seempawu ezizodwa zemozulu yale nxalenye yeAegean kunye nokwakhiwa komhlaba kule nxalenye yeChios. Umgangatho wayo uphezulu kakhulu kunezinye ii-resin ezifana nepine okanye i-almond.
1 Imveliso enokusetyenziswa okuninzi
2 I-mastic resin ikhula njani?
3 Iindidi ze-mastic resin
4 Mastichochoria: iidolophu zentlaka
Imveliso enokusetyenziswa okuninzi
Ukusetyenziswa kwale resin kubuyela kumaxesha amandulo. Kubhaliwe ukuba kwifayile ye- IGrisi yakudala yayisetyenziselwa ukuqhola abafileyo, ngelixa Ubudala baseRoma Yayiyimveliso exatyiswa kakhulu ngamanenekazi eentsapho ezinobungangamsha, awayeyihlafuna ukuze aphelise ukunuka komphunga kwaye ayenza nokuba isebenze njengothotho lwamazinyo. Ngokuchanekileyo igama lesiSpanish elithi "hlafuna" livela kolu setyenziso ludala lwe-mastic resin.
Ngamaxesha oBukhosi base-Ottoman, i-mastic yayigqalwa njengemveliso ebutofotofo. Ubusela bakhe bohlwaywa ngokufa. Igama lesiTurkey lesi siqithi AdasiIthetha ukuthini "Isiqithi serabha".
Kumaxesha akutshanje, kusenokwenzeka ukuba ukusetyenziswa kwale resin ibalaseleyo kuye kwanda, kwaba yinto edumileyo kwihlabathi liphela. Namhlanje umzekelo, isetyenziswa kwi ukwenziwa kwezixhobo ezithile zomculo kwaye ukho kwi ukwakheka kwedayi kunye neepeyinti. Isetyenziswa njengokugaya nokwenziwa kwezithambiso. Lilonke, ngaphezulu kwe-60 yokusetyenziswa kwale mveliso kuye kwadweliswa.
Kwicandelo le-gastronomic, i-mastic resin inezinto ezininzi zokuyithetha, nenendima ebalulekileyo kwivenkile yamaGrike, yaseSipro, yaseSyria neyaseLebhanon. Ngaphandle kokuqhubeka, utywala obudumileyo bamaGrike imasticha iqulethe isixa esincinci kodwa esibalulekileyo sayo. Kodwa ukongeza, kulisiko eChios nakwezinye iindawo zaseGrisi ukongeza amathontsi entlaka kwizonka, iikeyiki, i-ayisi khrim, iikeyiki kunye neicookies.
IChios mastic sisixhobo esibalulekileyo se- chrism, ioyile engcwele esetyenziselwa ukuthambisa kwiicawa zamaOthodoki.
I-mastic resin ikhula njani?
Sele kudlule iinkulungwane, kodwa inkqubo yokuqokelelwa kwentlaka yemastic ayikatshintshi ukusukela ngelo xesha ukuza kuthi ga namhlanje. Ngeenyanga zika-Agasti nangoSeptemba, abalimi benza uthotho lokucheba kumagxolo omthi. Ubisi lwe-gelatinous emva koko luqala ukuphuma ngaphandle, luwe ngohlobo olukhulu, olukhazimlayo iinyembezi.
Emva kweentsuku ezili-15 okanye ezingama-20 intlaka iwela emazantsi omthi, iyoma ize yenze umaleko oqinileyo osuswa ngabalimi kwaye uhlanjwe ngamanzi amatsha. Le vidiyo ilandelayo ichaza inkqubo kakuhle:
Inkcubeko ye-mastic resin yonyulwa njenge Inkcubeko yeLifa leMveli engabonakaliyo yi-UNESCO ngoNovemba 27, 2014.
Iindidi ze-mastic resin
Zimbini iintlobo eziphambili ze-mastic resin. Bahlukile omnye komnye ngenqanaba lokucoceka:
I-mastic resin eqhelekileyo, mnyama ngombala, oqulethe ukungcola okuninzi. Nangona kunjalo, iyaxabisa kakhulu iipropathi zayo ezisempilweni zomsebenzi wokwetyisa.
I-resin yemastic yentlakaUmbala omdaka ngombala, uburhabaxa ngaphandle kwebala kunye nokubonakala kweglasi.Iyinto entle kakhulu kwaye inevumba elimnandi kakhulu. Iyaqina kumasebe emastic kwaye ayiwi emhlabeni, yiyo loo nto inyulu kune-mastic eqhelekileyo. Ixabiso lekilogram ye-teardrop mastic resin ijikeleze i-150 euro.
Mastichochoria: iidolophu zentlaka
Indawo esemazantsi eChios yaziwa ngegama le Mastichochoria (NgesiGrike, "abantu be-mastic"). Kukho iindawo ezingama-24 zizonke imveliso yazo ibandakanyiwe ngaphakathi Ukuchongwa okuKhuselweyo kweMvelaphi yi-European Union.
IPyrgi, eyona dolophu inkulu kwingingqi yaseMastichochoria
Phakathi kweendawo eziphila ngokulima i-mastic, kufuneka sikhankanye IPyrgi, iMesta, iArmolia, iKalamoti y IKallimasia, phakathi kwabanye.
Ukuveliswa kwentlaka yemastic kwesi siqithi kusezandleni zombutho omnye owasekwa ngo-1938. Lo mbutho ulawula Imyuziyam yaseChios Resin, ebonelela ngomboniso osisigxina kwimveliso yobuncwane bendalo, imbali yayo, ubuchule bayo bokulima kunye nokusetyenziswa okwahlukeneyo okunikezelwe kubo namhlanje.
Nge-18 ka-Agasti ka-2012, a umlilo omkhulu wehlathi eChios olunyanzelise ukufuduswa kweedolophu ezintlanu ezikumazantsi esiqithi kwaye oko kwatshabalalisa malunga nama 7.000 eehektare zamahlathi kunye neefama. Ukutshatyalaliswa kwakonakalise ngokukodwa ummandla waseMastichochoria, apho malunga neepesenti ezingama-60 ze-mastic zalahleka. Icandelo lemveliso yentlaka yemastic lafumana ubunzima Ukubetha kanzima kwaye ikwazile ukuphinda ifumane amanqanaba angaphambi kwentlekele kwiminyaka embalwa edlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » I-mastic resin, eyinzalelwane yaseChios